Dhagayso Afhayeen Qur’aan-jecel: Dowladdu waxay u aragtaa warbixintii Xafiiska Difaacaha Xaquuqul aadanaha mid lagu dag dagay. – Radio Daljir
Abriil 18, 2016 2:49 g 0
Garowe, April – 18 – 2016 – Warsaxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu caddeeyay in aysan deegaannada Puntland ka jirin wax-gabood-fallo ah ama tacadi ah oo lagula kaco dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya.
Xukuumaddu waxay sheegtay in lagu dag-dagay qoraal 16-kii bishaaan kasoo baxay xafiiska difaacaha madaxa-bannaan ee xaquuqul-aadanaha Puntland, waxaana dowladdu sheegtay in ay amni, hormar, iyo xasilooni ay ku haystaan deegaannadeeda dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya.
Afhayeenka Madaxtooyada Dowladda Puntland Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac (Qur’aanjecel) ayaa waraysi gaar uu siiyay Radio Daljr waxaa uu ku beeniyay in aysan Puntland ka jirin wax gabood-fallo ah. Qur’aan jecel waxaa uu sheegay in dowladda Puntland ay aad uga xuntahay labo qof oo rayid ah oo lagu dilay dhawaan Gaalkacyo, wuxuuna shaaciyay in dowladdu guddi baaraya arrintaasi ay u xilsaartay, si cadaaladda loo hor-keeno.
War saxaafadeedka dowladda Puntland kasoo baxay ayaa kusoo beegmaya, xilli 16-kii bishaan qoraal kasoo baxay Xafiiska difaacaha madaxa-bannaan ee xaquuqul aadanaha Puntland lagu eedeeyay hay’adaha ammaanka, eedaasi oo la xiriirtay in dad ka badan 400 oo qof ay isaga jiraan xabsiyada Puntland, walina aysan wax cadaalad ah helin.
Halkaan ka dhagayso waraysi Wariye Maxamed Cabdullaahi Cali Kooshin uu la yeeshay Afhayeenka Xukuumadda Puntland C/llaahi Maxamed Jaamac Qur’aan-jecel.